Fizahan-tany Armenia: Miroso tanteraka ity firenena kely ity
Home » Toerana fitsangatsanganana » Fizahan-tany Armenia: Miroso tanteraka ity firenena kely ity
Ilay manan-tantara kely Armenia manankarena kolontsaina, izay ampahany amin'ny USSR matanjaka, dia manao fidirana an-tsehatra mafy eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Mitombo isan-taona ny fizahantany Armenia ary manohy mampivoatra ity fototra ity.
Manana ny toerana manintona sy hetsika maro ho an'ny mpizahatany io toerana io, hoy i Naira Mkrtchyan avy amin'ny oniversite iraisam-pirenena rosiana Armeniana tamin'ity mpanao gazety ity tany New Delhi, izay niresahany tamin'ny fihaonambe iraisam-pirenena momba ny fizahan-tany sy fizahan-tany faha-10 nokarakarain'ny Chandiwala Institute.
Ny taratasiny dia noraisin'ilay fanangonana marobe avy any India sy avy any ivelany. Taty aoriana dia nifandray tamin'ity mpanoratra ity izy mba hilaza bebe kokoa momba ny firenena sy ny fizahantany fizahan-tany any.
Lavash, ilay mofo nentim-paharazana ary fanehoana ny kolontsaina any Armenia, dia tamin'ny 2014, voasoratra ao amin'ny lisitry ny UNESCO Heritage of Intangible Cultural Heritage of Humanity. Ny sakafo ao amin'ny firenena dia tena ankafiziny amin'ny faritra maro eto an-tany.
Nambaran'i Naira fa ny politika Open Sky nanomboka ny 1 Oktobra 2013, dia nanampy ny fizahan-tany, ary nitombo ny fahaizan'ny rivotra. Nisy politika politika mora natomboka ary nisy ny dingana natao hanatsarana ny lalana, ny hotely ary ny tsangambato. Ireo lava-bato maro ao amin'ny firenena dia manintona mpitsidika marobe, hoy izy, ary nandoko fa indraindray ny olona dia mampifangaro an'i Armenia amin'i Romania. I Armenia dia iray amin'ireo firenena azo antoka.
Raha niresaka momba ireo karazana fizahan-tany dia nilaza ilay mpikaroka mpikaroka fa ny gastrotourism, fizahan-tany ara-pahasalamana ary ny balon-drivotra mafana no tena manintona. Nirongatra ihany koa ny dia an-tsena, ary nisarika ihany koa ny fiainana amin'ny alina. Ny konseritra sy ny tarika dia mampifaly ny mpitsidika ihany koa. Armenia dia mahay amin'ny fampifangaroana ireo zava-mahaliana amin'ny fiainana ankehitriny.
Mahita laza betsaka eo amin'ny sehatry ny fivavahana ihany koa i Armenia. Betsaka ny olona avy any Armenia no nanorim-ponenana tany ivelany, anisan'izany ny India. Ary koa, noho izy matanjaka amin'ny fanabeazana ara-pitsaboana, mahasarika mpianatra maro ny firenena, izay midika ho orinasam-pizahantany bebe kokoa.
National Geographic dia nametraka an'i Armenia ho ao anaty lisitra fohy amin'ireo toerana voatondro ho tsara indrindra, raha toa kosa ka UNWTO dia mametraka an'i Armenia amin'ny toerana faha-12 eo amin'ireo toerana mandroso fizahantany.
Russia, firenena CIS, ary ny Vondrona eropeana dia mitaky ampahany betsaka amin'ny fahatongavan'ireo mpizahatany, raha 5 isan-jato kosa ny USA ary 5.4 isan-jaton'ny isan'ny Iran tonga.
Ny fitomboan'ny isa tamin'ny taona 2019, ny taona 2018, dia 14.7 isan-jato, ary ny taona teo aloha dia nahitana fiakarana 26.7 isan-jato. Ny tandindona matanjaka rehetra amin'ny firenena fizahan-tany dia mirongatra.
Qatar Airways dia mampitombo ny anjarany amin'ny International Consolidated Airlines Group
Ahoana no fananganana superyacht an'ny mpanjifa? Mijery akaiky kokoa isika
37 minitra lasa izay